XOG-Maxaa Kajira in Beelaha Sool iyo Cayn Ka Tanaasuleen Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland.
December 4, 2018 puntlandnews Puntland, Wararka Maanta 1
Puntlandnews.net (NAIROBI)-Puntland waa maamulka ugu facaweyn guud ahaan Soomaaliya marka laga reebo maamulka Somaliland oo ku dhawaaqay inuu madax banaani ka qaatay Soomaaliya inteeda kale.
Laga soo bilaabo dhismihii Puntland sanadkii 1998-dii waxaa soo maray madax kala duwan waxaana dhammaantood soo dooranayey 66 xildhibaan oo ay soo xulaan odayaasha dhaqanku ogolaanshana ka haysta isimada gobolada Puntland.
Bisha 1aad ee sanadka 2019 waxaa lafilayaa in Puntland ay ka qabsoonto doorashadii 5aad oo rasmi ah laguna soo doorto madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen bedeli doona madaxweyne Gaas iyo Eng Camey oo muddo bil ah u dhimman tahay.
Haddaba waxaa dad badan oo reer Puntland ah kuna nool dalka iyo dibaddu iswaydiinayaan sababta ilaa hadda aan loo ahyn musharax si rasmi ah ugu taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka Puntland ee doorashada 2019.
Madaxweyne ku-xigeenadii soo maray Puntland ayaa dhammaan ka soo jeediyey gobolada Sool iyo Cayn waxaana aad loo hadal hayaa haddii sanadkaan uu imaan karo isbedel ka duwan midkaasi kadib sanado badan oo goboladaasi ay ka soo baxayeen.
Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey soo baxayey warar sheegaya in beelaha Dhulbahante aysan ka qaybgeli doorashada Puntland inta Somaliland ay gacanta ku hayso magaalada Laascaanood iyo deegaamada kale ee gobolka Sool.
Nin saxaffi ahaa oo u dhashay Massar ayaa waa wuxuu ka qoray Carabta in ay ku heshiiyeen in aynan heshiin. Dhulbahante haddan nahay waxa kaliya oo aan ku heshiinno waa inaynaan heshiin. U malayn mayo in qaraar dhulbahante u wada dhanyahay in uu hirgalayo. Haddaan qaraar ku heshiin karno, deegaan daaqeenna qabiileed , Isaaq (SomaliLand) iyo Majeerteen (PuntLand) iskuma qabsadeen ee innagaa u dagaalami lahayn oo maamulan lahayn, sida (deegaan daaqyada qabiileed) oo lagu magacaabay dawlado goboòeeddada.